बिचार/ विश्लेषण Archives - Page3of 16 - RatoKalam.com is No one news portal.
बिप्लबको आमसभा विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति प्रेरणाको दिन थियो:विप्लब कार्यकर्ता!
रातोकलम अनलाइन! मलेशिया सम्बादाता! नोभेम्बर-२५ विप्लब नेतृत्वको नेकपा पार्टी पूर्नगठन को अवसर पारेर सनिबार काठमाण्डौको भिर्कुटि मन्डपमा बिशाल जनसभा सम्पन गरेको छ ! उक्त कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता नेकपाका प्रबक्ता प्रकाण्ड रहेका थिए! उक्त सम्पन सभामा बोल्ने प्राय सिर्स नेताहरुले अहिलेको राज्य सत्ता दलाल र पूजिबादि राज्य सत्ता भएको हुनाले यसले जनताको मत र...
तिन कोइरालाको एकता, पारिवारिक एकतामा रुपान्तरण हुनु हुदैन!
हिंसा जन्माउने अभिव्यक्ति
संविधान निर्माण भएपछी पहिलो पटक प्रतिनिधी सभाको चुनाव वाट निर्मित सरकार आएपछी नेपालको राजनीतिमा देखिएको सामाजिक अस्तव्यस्तता , खस्कदो अर्थ व्यवस्था र राजनीतिक असुध्दता वडेर गएको छ । अहिले मुलुकमा महिला हिंसा , महिला...
के अब प्रचण्डले चाहेजस्तै क्रान्ति सफल भएको हो त ?
५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले हामीसँगको कुराकानीमा वर्तमान परिस्थितिकोे विश्लेषण यसरी सुनाए- अझै एकाध वर्ष हेर्नुपर्छ क्रान्तिको परिभाषा धेरैले धेरै किसिमले गर्छन् । एउटा परिभाषा के हो भने पुरानो राज्यसत्तालाई ध्वस्त पारेर नयाँ संरचना खडा गरी सत्ता सञ्चालनमा अर्को वर्गलाई नेतृत्वमा ल्याउनेलाई क्रान्ति भन्ने एउटा परिभाषा छ । त्यस्तो क्रान्ति त...
नेपाली कांग्रेस ले नदेखेको अधिनायकवाद
प्रतिनिधी सभाको चुनाव ताका नेपाली काग्रेसले आफ्नो चुनावी नारामा " वामगठवन्धनले जीते अधिनायकवाद आउछ" भनेको थियो । अहिले कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ , काग्रेसले वामगठवन्धन को सरकार को अधिनायकवाद को कुरा किन उठाइरहेको छैन , प्रतिपक्षले यो मुध्दा देखिरहेको छैन ?
देखेर पनि आफैमा...
मंगल अमंगल भएपछी के गर्ने
मेष र वृस्चिक राशीको स्वामी मंगल ग्रह हो र यो भुमी कारक हुन्छ । भुमीलाइ उठाउने गगटा अर्थात जमिन मुनी गगटा वस्छ र जमिन उठाउछ । यी दुवै रासीलाइ कर्कट राशी योगकारक हुन्छन ,कर्कट भनेकै गगटा हो । कर्कट जल प्रधान पनी हो जलिय...
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता !
अनुवादक ओम आचार्य ( सन १९७४ मा आक्सफोर्डमा आयोजित एक सम्मेलनमा " लिवरल इन्टरनेशनल" को स्थापना गरिएको थियो । " लिवर इन्टरनेशनल" को व्रिटिश शाखाले १९४९ मा स्वतन्त्रताको अर्थ विषयमा एक भाषण मालाको आयोजना गरेको थियो । जस्मा गिलवर्ट मुरे, डव्ल्युआर मैथ्युस , ग्राहम हटन , विक्टर...
संविधान सभाकै सरकार शैलि र त्यही अभ्यास
माओवादीको शशत्र आन्दोलन संग शान्ती सम्झौता भएपछी संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन को समयावधि भित्र पनि संविधान वन्न नसकेपछी सात दलको आपसी सहमती वाट पुन म्याद थप गरी पुन सविधान सभाको निर्वाचन गरियो र त्यस पछी को कडा परिश्रम र मेहनतवाट संविधान वन्यो ।